Lesoka fakana lesona… | NewsMada
Lesoka fakana lesona…
Tsy manao enji-dresy na mandatsa, sanatria. Mba tsy fahita teto hatramin’izay kosa ny hoe filohan’ny Repoblika am-perinasa, na nametra-pialana roa volana mialoha aza, ny farany teo: tsy tafakatra hiatrika ny fifidianana fihodinana faharoa, tsy mahazo ahay ny 10% amin’ny vaton’ny mpifidy farafaharatsiny. Nahoana?
Misy ny milaza fa tsy afa-nanao hala-bata sy hosoka rehefa tsy eo amin’ny fitondrana? Hafa ny tamin’ny fifidianana kaominaly sy senatorialy, taona 2015, feno hosoka sy hala-bato ranofotsiny. Mby aiza amin’izany izao ny hoe antoko matanjaka indrindra, manana ny maro anisa indrindra, akaiky vahoaka indrindra… ?
Tsy inona fa famitaham-bahoaka tsotra izao, famitahan-tena ihany koa. Lesona iray hafa koa izay: tsy marin-toerana izay azo amin’ny tsy marina, tsy maharitra, malemy… Mby aiza koa izao ny hoe tsy misy mahavita ny vitan’ny tena ny teto nandritra izay 50 taona mahery izay? Sahy mifampitaha, sahy mifampitana…
Lesona ihany koa izay: tsy zazabodo na bado ny vahoaka, ka tsy mahalala ny tena zava-misy sy izay iainana isan’andro vaky. Tsy vitan’ny vava sy ny evotrevotra am-pitsanganana io. Mety misy tokoa ny zava-bita fa tsy mipaka amin’ny vahoaka na tsy mahenika azy, tsy araka ny hetahetany, tsy mahamaika azy…
Mety ny ratsy koa no be no ho ny tsara raha misy? Lesona iray koa izay: mba kibo mitsara tena amin’izay lazaina sy atao. Asa vava tsinona no be fa tsy vava asa. Tsy mahagaga raha misintaka amin’ny tena ny mpila ranondranony sy ny tombontsoa. Izay no tena nanetsika, nampiray, nahabe kabary sy hambompo… ?
Ny vava no tsy atao be, ny mamerina azy no tsy laitra. Aleo tsy atao be koa ny resaka eto! Ny tetikasa no tsy atao be, ny manatanteraka azy no mafy sy mafaitra? Mba tsy hotsaraina sy latsain’ny tantatra. Lesona ihany koa izay, ho an’ny mbola ho avy indray… Mba tsy ho be famaritra fa kely fiasa. Ho lasan’izay ny lasa rehetra?
Eo ny vahoaka hitsara, hisafidy, hanapa-kevitra… “Tsara kokoa ny mandà inarivo no ho ny fampantenana iray tsy tanteraka”, hoy ny ohabolana sinoa.